ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲရှင်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲရှင်။
Posted by ကထူးဆန်း on Mar 17, 2012 in Short Story | 63 comments
ကျွန်မ ခေါင်းတွေလည်းပူ ၊ ရင်တွေလည်းပူနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး ။ မသိပေမဲ့လည်း ကျွန်မ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့ မှာပါ။ ဒီရေကိုတော့ မသိပေမဲ့ အချိန်ဆိုတာ လူကို မစောင့်ဘူးဆိုတာတော့ အရမ်းကို စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ်နေရပါတယ် ။ နာရီစက်တံများ ရပ်လို့ ရရင် ရပ်ထားချင်လှပါတယ် ။ ဒါမှ လကုန်ရင် ဒီအိမ်ပေါ်က ဆင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဆီကို မရောက်အောင်ပေါ့ ရှင်ရယ်။
ရှင် ။ ဟုတ်ကဲ့ ။ကျွန်မ အသက် အခု ၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်မ အကြောင်းလား နဲနဲ ပြောပြပါ့မယ်ရှင် ။ ကျွန်မ ပညာရေး ကံခေခဲ့ပါတယ် ရှင်ရယ်။ စာတော်တဲ့ ကလေးမ လေးရယ်လို့ ငယ်ငယ် က လူတစ်ကာ ချီးမွမ်းခံခဲ့ ရတဲ့ ကျွန်မဟာ ရှစ်တန်းမှာ အမေ အဖေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အပြို အကွဲမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လားရာကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ အဖေနဲ့ အမေ ဘာကြောင့် ကွဲတယ် ဆိုတာ အိမ်တွင်းရေးမို့ မပြောပါရစေနဲ့ ။ အမေနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မ အကိုရယ် ကျွန်မ ရယ်ဟာ လူ့လောက ဆိုတာကို စတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရပါတယ်။ စိတ်ပြတ်တဲ့ အဖေလို့ ပြောရမလား ၊ ရက်စက်တဲ့ အဖေလို့ ပြောရမလား ၊ ထွက်သွားတဲ့ နေ့ကစပြီး ကျွန်မတို့ကို တစ်ချက်လောက်တောင် စောင်းငဲ့ ကြည့်ဖော်မရခဲ့ပါဘူး ။ ကော့သောင်းဘက်မှာ အလုပ်သွား လုပ်နေပြီး နောက်အိမ်ထောင် နဲ့ နေနေတယ် ဆိုတာ အဖေ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးကြားရတဲ့ သတင်းပါဘဲ။ အဲ့ဒီံ့ဒါဏ်ရာ ဒါဏ်ချက်ဟာ ကျွန်မကို အတန်းထဲမှာ ဟိုးအောက်ဆုံး အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ ပြီး ဆယ်တန်းမအောင်တဲ့ သူ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်တန်းထပ်ဖြေဖို့ဆိုတာလည်း အိမ်စီးပွားရေး အခြေအနေကြောင့် မဖြေဖြစ်တော့ဘဲ အလုပ်ခွင်ထဲရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီံ အချိန် ကျွန်မ အသက် ၁၇ နှစ် ဘဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မရောက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ခွင်က အဲ့ဒီ့ အချိန်ကခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဆံပင်ညှပ် ခေါင်းလျှော် ပြီးရင် နှိပ်ပေးရတဲ့ ဗြူးတီးဆလွန်းပါ ။
ရှင် ။ အသန့်ပါ ရှင်ရယ် ။ ယောင်္ကျားကြီးများလာတဲ့ ဆိုင်ဆိုပေမဲ့ ခေါင်းလျှော်တဲ့ ခုံပေါ်မှာသာ နိုပ်ပေးရ၊နင်းနယ်ပေးရတာပါ။ အဲ နှာဘူးထတဲ့ သူများတော့ လက်ဆွဲ မထိသထိ လုပ်တာတွေတော့ လောက်တော့ခံရတာပေါ့ရှင်။မကြိုက်ပေခဲ့ သည်းညဉ်းခံရတာပေါ့ ။
ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့။ အကိုလား။ အကို လည်း ကျွန်မလိုဘဲ အဖေထွက်သွားတဲ့ အချိန်ကစလို့ ကားစက်ပြင် ၀ပ်ရှော့ တစ်ခုကို အမေ ပို့လိုက်တာ ခံလိုက်ရပါတယ် ။ အမေကတော့ ဈေးရောင်းမယ်လုပ်လိုက် ။ အရင်းပြုတ်လိုက်နဲ့ သံသရာလည်ခဲ့ပါတယ်။ အမေ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်ခဲ့ရင်တော့ ဒီလောက် အခြေအနေမဆိုးနိုင်ပါဘူး။ နှစ်လုံးသုံးလုံး ချဲထိုးရတာနဲ့ အမေ မကြာခဏ ကြွေးတင်ရင်းကနေ မွဲသထက်မွဲလာတဲ့ အပြင် ကျန်မာရေးပါခြူခြာ လာတဲ့ အတွက် ကျွန်မလည်း ဆိုင်အိပ်ဆိုင်စားကနေ ထွက်ရတဲ့ အခြေအနေ ရောက်သွားပါတယ်။ အမေ့ကို ပြုစုဖို့ စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်တွေ ကျွန်မဆီရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်မ၀င်ငွေ ဘယ်လာမှန်တော့မလဲ ရှင်ရယ်။ ရှင်နည်းရာ အဂ္ဂလူထွက် အဲ့ဒီ့ အချိန်မှာ ကျွန်မ အကိုကလည်း သူအလုပ်လုပ်တဲ့ ကားဝပ်ရှော့ ဆရာ့အိမ်က အ်ိမ်ဖော်မလေးကို ခိုးပြေးသွားပါတယ် ။အခုတော့ သူလည်း သူ့အပူနဲ့ သူ။ သူ့ဒုက္ခနဲ့သူ။ အမေအိမ်လာဖို့နေနေသာသာ သတင်းတောင် မေးဖော်မရပါဘူး။ သူကော အမေ့ဆွေမျိုးတွေကောက သူမသာ ကိုယ်အသုဘ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သ်ိပ်မခြားတဲ့ ဘ၀တွေပါ။ ကူညီချင်စီတ်ရှိရင်တောင်မှ မကူညီနိုင်ကြတဲ့ ဘ၀တွေပါ။
ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ အမေရယ် ၊ ၀င်ငွေမမှန်တော့ တဲ့ ကျွန်မရယ်နဲ့ လုံးခြာလည်လိုက် နေရာကနေ အခုတော့ အခုတော့ ကျွန်မတို့ နေတဲ့ အိမ်ရှင်တွေက အိမ်ပြောင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေပါပြီ။ အခုနေတဲ့ အိမ်က နေတာကြာလာတော့ သူတို့လည်း လခပိုလိုချင်တာရယ် ၊ ကြာကြာနေရင်နောက် ဆင်းခိုင်းလို့မရမှာကိုစိုးရိမ်လို့ ရယ် ကျွန်မတို့ကို ဆက်မထားနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောပြလာပါတယ်။ တောင်းပန်ရင်း အိမ်ရှာရင်းနဲ့ဘဲ သူတို့ပြောင်းခိုင်းတာ နှစ်လ ကျော်လာပါပြီ။ အခုနေတဲ့ အိမ်က အိမ်လခ ၂၅၀၀၀ ကျပ်သာ ပေးရပေမဲ့ အခု လိုက်မေးတဲ့ အိမ်တွေ အားလုံးက အနည်းဆုံးလေးသောင်းနဲ့ ခြောက်လ စာချုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ပွဲစားခ အပါ ကျွန်မ ပိုက်ဆံ သုံးသိန်းလောက်လိုနေပါတယ် ။ ဘယ်မှာ သွားရှာရမလဲဟင် ။ ပေါင်စရာလည်း မရှိ။ ရောင်းစရာလည်း မရှိတော့တဲ့ အပြင် ဘယ်သူကမှလည်း အလုပ်အကိုင် အသေအခြာ မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ သားအမိကို မချေးခြင်ကြပါဘူး။ ချေးရင်လည်း ပြန်ဆပ်ဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲတာ အမှန်ပါဘဲရှင်။
အိမ်ရှင်တွေကလည်း ဒီလ ကုန် နောက်ဆုံးဘဲ။ နောက်ထပ် ဘယ်လိုမှ ဆက်မတိုးပေးနိုင်တော့ဘူး ။ ပြောင်းရင်ပြောင်း မပြောင်းရင် ရပ်ကွက်တိုင် ရဲတိုင်ပြီး အတင်းဆွဲချမယ် ပြောလာပါပြီ။ ကျွန်မရှက်လှပါတယ် ။ ပြောင်းလည်း တကယ့်ကိုပြောင်းပေးချင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ … အဲ့ဒီ့ ဒါပေမဲ့က ရှင်တို့ကိုပြောပြထားပြီးတဲ့ သုံးသိန်းသော အသပြာ ဘယ်က ရှာရမှန်းမသိတာပါဘဲ။
ရှင် ။ ဟုတ်ကဲ့။ မရှက်တန်း ၀န်ခံရရင် ကျွန်မမှာ ချစ်သူ ရှိပါတယ်။ သူက သူက ပြောရရင်တော့ လက်ကြော မတင်းတာလား ဘာလဲ မပြောတတ်တော့ပါဘူးရှင်ရယ် ။ သဘောင်္လိုက်မယ် ၊ နိုင်ငံခြားမှာ သွားအလုပ်လုပ်မယ်ဘဲ ပြောနေပြီး ဘယ်မှာမှလည်း အလုပ်ဝင်မလုပ်ပါဘူ။ အလုပ်တစ်ခု ၀င်လုပ်ပါဆို ရတဲ့လခ နဲ့ ဘာသွားလုပ်မှာလည်း။ ကားခနဲ့ ဆေးလိပ်ဖိုး၊လ္ဘက်ရည်ဖိုးလောက်သာ ရတာ။ တစ်လ ဘာကျန်မှာမို့လည်း။NGO လိုမျိုး လစာကောင်းရင်တော့လုပ်မယ် ဆိုတာနဲ့ ဘယ်မှာမှလည်း ၀င်မလုပ်ပါဘူး။ အချိန်တွေသာ ကုန်လာခဲ့ပြီး ကျွန်မခုလို အခက်အခဲဖြစ်လို့ ကူညီအဖြေရှာပေးပါဦးဆိုတော့လည်း သူလည်းသူ့မိဘဆီက လက်ဖြန့်တောင်းနေရတာ။ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းထဲမှာလည်း ချေးပေးမဲ့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့ အဖြေသာ ရခဲ့ပါတယ်။ မပြောချင်တော့ပါဘူးရှင်ရယ်။
ရှင် ။ဟုတ်ကဲ့ ။ ကျွန်မဟာ ချောမောသူတစ်ယောက်ဆိုတာလည်း အမှန်ပါဘဲ။ စပွန်ဆာလား မရှိပါဘူးရှင်ရယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်လုပ်နေတုန်းက ကျွန်မကို ကြိုးစားခဲ့ဘူးသူများရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ သိက္ခာ၊ ကျွန်မကိုယ်ကျင့်တရားကို အလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင် ဆိုတာကို ကျွန်မအိမ်ထောင်ကျတဲ့နေ့ကြမှ စွန့်လွှတ်မယ်ဆိုပြီး နေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မချစ်သူ ကလား။ ပြောရရင် တည်းခိုခန်းသွားဖို့ သူခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ငြင်းဆန်ခဲ့လို့ မကြာခဏ ကျွန်မကို စိတ်ကောက်ပြခဲ့သလို တောသူဆိုပြီး လည်း အပြောခံခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အလိုမလိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မ ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မ မြန်မာမလေး အမျိုးကောင်းသားသမီး အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲဆိုရင် ကျွန်မ နေစရာပေး၊ထမင်းကျွေးတဲ့ ဘယ်နေရာမဆို ၀င်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ အမေ ရှိနေတော့ လုပ်လို့မရပါဘူး။ အိမ်ငှားမှ ဖြစ်မှာပါ။ အမေနဲ့ အဆောင်ခန်းငှားနေရင်လည်း ဒီလောက်ကျမှာဘဲလေ။ တစ်ယောက် ၁၅၀၀၀ ဆိုရင် နှစ်ယောက်ဆို ၃၀၀၀၀ ဖြစ်နေပြီလေ။ အမေက ကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ အဲ့ဒီ့ အဆောင်တွေကလည်း လက်မခံပါဘူး။ လှိုင်သာယာ က အဆောင်ခန်းတွေကျတော့လည်း ဘေး အခန်းတွေ နဲ့ ထရံ့တစ်ချပ်သာ ခြားပြီး အရမ်းကပ်တော့ လူသံ ဟင်းချက်သံ ဆူညံသံတွေနဲ့ အမေ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ခေါင်းခြောက်နေရတာပေါ့ ရှင်ရယ်။ လကုန်ဖို့ က နှစ်ပါတ်လောက်ဘဲ လိုတော့တယ်။ ကျွန်မ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မှာပါ။
ရှင် ။ ဟုတ် … ဟုတ် .. ဟုတ်ကဲ့ ။ ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင် ဘ၀ကို သုံးသိန်းနဲ့ လဲဖို့ပါ ။
နောင် … နောင်ဘယ်လို လုပ်မလဲ ။ မစဉ်းစားနိုင်သေးပါဘူး ရှင်။ လောလောဆယ် ကျွန်မရဲ့ ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ဒီတစ်ခုသာတွေ့လို့ပါ။
ဘာလုပ်ရမလဲ ရှင်ရယ်……………………။။။။။။အကြံပေးနိုင်ရင် ပေးပါဦး။။။။။။။။။။။။။။။
(အသိတစ်ယောက် ၏ ပြောပြချက်အား ပြန်လည်ခံစားတင်ပြပါသည်)
မြန်မာယောက်ျားတွေ.. အပျိုစင်ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားတယ်… ဆို…..ဆို… ဆို…
ဒါတောင်… ၃သိန်းနဲ့..အရောင်းအ၀ယ်တဲ့တယ်ဆိုရင်.. အပျိုစင်ကို တန်ဖိုးထားပါတယ်..ဆိုတဲ့..စကားတွေကို… သံသယဖြစ်ရလိမ့်မယ်.. .ပေါ့..။
သူကြီး Kai ရဲ့
၁ ။ သိပ် အချောအလှကြီး မဟုတ်ရင် ၊
၂ ။ Celebrity မဟုတ်ရင် ၊
၃ ။ ထူးထူး ခြားခြား အချဉ် မိတာ မဟုတ်ရင် ၊
မိန်းကလေး အပျိုစင် တစ်ယောက်ရဲ့ Virginity ဟာ
သုံသိန်းခွဲ လောက် ကနေ ငါးသိန်း ကြားမှာပဲ ရှိပါတယ် ။
ပစ္စည်း စစ် မစစ် တော့ အဘ အာမမခံနိုင်ဘူးပေါ့ကွယ် ။
အဘ အသိ တစ်ယောက် ပြောတာကတော့
တချို့မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ကိစ္စ အတွင်းမှာ
သူတို့ လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေကို သူတို့ ကိုယ်တိုင် အနာခံ ကိုက်ဖြတ်ပြီး
သွေးစ သွေးန လေးတွေသုတ်ပြီး လိမ်ကြတယ်ပြောတယ် ။
အထူး မှတ်ချက် ။
အဲဒီ ဈေးဟာ ကျွန်တော် သိသလောက် ၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်ကတည်းက ဈေး သိပ်မပြောင်းပါ ။
Supply & Demand သဘောတရား အရ ၊
ရောင်းလိုအား များပြီး ၊ ဝယ်လိုအား နည်းပါးသဖြင့် ၊
ဈေးကို ဆွဲတင်လို့မရ ဖြစ်နေဟန် ရှိပါသည် ။
နိုင်ငံခြား ဈေးကွက် ရှာနိုင်မှ ၊ ဈေးကို ဆွဲတင်လို့ရပါမယ် ။
ပြည်တွင်းဈေးကွက် အနေနှင့်ကတော့ ၊
Customer တွေ အရမ်း Limited & tight ဖြစ်နေပါတယ် ။
Marketer ဆရာ ဂီ ကို Out-sourcing ရှာခိုင်းမှထင်တယ် ။
စိတ်မကောင်းစရာ တစ်ခုကတော့ ၊
ဒီ Post ထဲမှာပါတဲ့ ကောင်မလေးက အသက် ၂၂ နှစ်ဆိုတော့ ၊
အသက်သိပ်ကြီးနေပါပြီကွယ် ၊ ဈေးကောင်း မရ နိုင်တော့ပါဘူး ။
Virginity လိုက်စားသူတွေက တစ် ထိပ်စီး ကိုမှ စိတ်ဝင်စားတာပါ ။
နှစ် ထိပ်စီး ဆိုရင် နဲနဲ အင်သွားကြပါမယ် ။
အဘ ၊ ငယ်နုစဉ်က ၊ ကယ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဘူးသော်လည်း ။
ကယ်တင်၍ မနိုင်လောက်အောင် ၊ မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းမှာ ၊
မိန်းကလေးပေါင်း သိန်းချီပြီး ၊ ဒုက္ခရောက်နေကြတာကို သိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ၊
ကယ်တင်ဖို့ အကြံတွေကို လက်လျော့ လိုက်တာ ၊ ကြာပါပြီကွယ် ။
MG ထဲမှာ အမျိုးကိုချစ်ကြောင်း
လျှမ်းလျှမ်း တောက် ရေးနေသူတွေ ကယ်ဖို့
“အဘ ၊ ငယ်နုစဉ်က ၊ ကယ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဘူးသော်လည်း ။
ကယ်တင်ဖို့ အကြံတွေကို လက်လျော့ လိုက်တာ ၊ ကြာပါပြီကွယ် ။”
ဘဖောရေ .. စာနာ နားလည် မှု့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘဖောပြောသလို ပါဘဲ ။ ကယ်တင်ချင်ရင်တောင်မှ စိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်ဖြစ်သွားလောက်အောင် များနေပါတယ် ။ အိမ်ငှားဖို့၊ မိုးမကျမီ အိမ် အမိုးမိုးဖို့၊ မိဘတွေ ဆေးကုဖို့၊ကိုယ့်မောင်ငယ် ကျောင်းတက်ဖို့ အတွက် ခန္ဒာကိုယ် စတေးခဲ့ တဲ့သူများစွာရှိပါတယ် ဆိုတာ ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ် ။
၃သိန်း … များဒယ် …
သူကြီးရေ .. ပွဲစားတွေ .. ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့ ခေါင်းတွေက ၅၀ % မက ခေါင်းပုံဖြတ်ကြပြီး ကာယကံ ဆီရောက်တာကတော့ ၅၀% အောက်လောက်သာ ရောက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီမီမိုး နဲ့ ရောဘတ်ရက်ဖို့ဒ် ရဲ့ “Indecent Proposal” ကား ကို ကြည့်ဘူးမယ် ထင်ပါတယ်။
ငွေ တစ်သန်း ရဖို့ မိန်းမ ကို သဘောကျသွားတဲ့ သန်းကြွယ် သူဌေး နဲ့ ကိုယ့် မိန်းမ ကို တစ်ည ပေးအိပ် ခွင့် ပြုခဲ့ပြီး မှ နောက်ပိုင်း ယောင်္ကျားက အဲဒါကို ဘဲ သဝန်တို နေခဲ့ပြီး လင်မယားကွဲ သွားတဲ့ အကြောင်း ဇာတ်လမ်းလေး။
ရုပ်ရှင် ဆိုလဲ ရုပ်ရှင်လို့ လွှဲချ တာပေါ့လေ။
အပြင်မှာရော ဒါမျိုး ဆင်ဆင် ဇာတ်လမ်း တွေ မရှိနိုင်ဘူးတဲ့လား။
မြန်မာ ယောင်္ကျား မှ မဟုတ်ပါဘူး။
အနောက်တိုင်းသား များလဲ သဝန်တို တတ်ကြမှာပါ။ ;-)
ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်တာပဲ..ကိုယ်ဈေးကိုယ် သတ်မှတ်တာပဲ …
လုံးဝ ရှုံ့ ချ ပါတယ် ….
jujuma ရေ ၊မြန်မာပြည် မှာ တစ်ချို့ အတွက် သုံးလေးသိန်းဘာမှ မဟုတ်ပေမဲ့ တစ်ချို့အတွက် သုံးလေးသောင်းတောင် အရေးပေါ် မရှာနိုင်သူတွေ အများကြီးပါ။ ဆင်းရဲသူတွေကြား တစ်ချက်လောက် ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲရှင် ဆိုတော့ ကျွန်တော်မျိုးလဲ မလျောက်တင်တပ်တော့ပါဘူးကွယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်ပဲဆုံး ဖြတ်ပါတော့။
အမလေး ၃သိန်းအတွက်နဲ့ ကိုယ်ဘ၀ကိုသူများကိုပေးချင်လဲပေးလိုက်ဟေ့
ရိုင်းရိုင်းပြောမယ် ညည်းမှာ အခြားရွေးစရာမရှိတော့ဘူးလား
ညည်းစိတ်ထဲမှာ သွားခံမှ ၃သိန်းရမယ်ဆိုလုပ်လိုက်
လှိုင်သာယာ က အဆောင်ခန်းတွေကျတော့လည်း ဘေး အခန်းတွေ နဲ့ ထရံ့တစ်ချပ်သာ ခြားပြီး အရမ်းကပ်တော့ လူသံ ဟင်းချက်သံ ဆူညံသံတွေနဲ့ အမေ မနေနိုင်ပါဘူး။
အမေကိုယ်တိုင်က မနေနိုင်ရင်ဘူးဆိုရင် အမပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပေတော့
မရဘူးဆိုရင် သွားပေတော့ အမရေ
ရင်လေး လိုက်တာ ကွယ် ။ အဲသလောက်တောင် ဖြစ်ပျက်နေပြီ..ဆိုတော့ …
ဒီတစ်ခါသုံးသိန်း နောက်တစ်ခါဆိုဈေးလျှော့ရင်းနဲ့ ပြည်လမ်းမဘေးမှာလဲလူတွေပုံနေပြီး
၃သိန်း သာရရင် လှုပ်ရှားလိုက် မင်းအတွက်တန်ပါတယ်၊ မင်းက အပျိုစင်အစစ်(အော်) ဆိုတာကို
ဒို့ဆိုရင် မင်လို မိန်းခလေးမျိုးကို သုံးသောင်းတောင်မပေးရဘဲ ရအောင်စည်ရုံးနိုင်တယ်…
မယုံမရှိနဲ့…အလောင်းအစာ တောင်လုပ်လိုက်ချင်သေးတယ်..အလိမ်အညာတွေပါ ခလေးလေးရယ်။
ကိုကိုအိုဗာရေ . အပျိုစစ် မစစ်ဆိုတာထက် လူတွေ ဘယ်လို ဒုက္ခရောက်နေကြတယ် ဆိုတာက အဓိကပါ။ တကယ်ကို မိမိ ခန္ဒာကိုယ်ရောင်းစားလိုက်ရတာ တွေ အများကြီးပါ။ စ်ိတ်မကောင်းစရာက ကိုကိုအိုဗာတို့လို့ စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိတဲ့ ယောကျာင်္းတွေကို ယုံစားမိတာကြောင့် မိန်းကလေး တော်တော်များများလည်း အပျို ဘ၀ ပျက်ကုန်သူများရှိတယ် ဆိုတာလည်း …
တအားတော့ ဆန္ဒ မစောသင့်ဘူး။ လှိုင်သာယာမှာအခန်းတွေ ထရံတစ်ချပ်ပဲခြားတယ်ဆိုတာရှိသလို အငယ်လေးတို့ ရွာရှိတယ်လို့လဲကြားဖူးတယ်။ အဲသလိုနေရာမျိုး နေရအောင် ကြိုးစားလိုက်ပေါ့ တသက်တာ မဟုတ်တောင် အတော်ကြာကြာအစဉ်ပြေနိုင်တယ်။အခြေခံကောင်းတွေရသွားနိုင်တယ်။(လိမ္မာရင်ပေါ့)
အမှန်ဖြစ်ဖို့ နဲ့ ရုပ်ရည်ရှိဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်။အဘဖောပြောသလို ၂၂ က အရမ်းဟိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်းမသိဘူး၊
ကိုထူးဆန်းက အဆက်အသွယ်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့။ ရွာထဲမှာ ဆရာကြီးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ စကားစပ်လို့ ကိုထူးဆန်း ရေးထားတာကဇာတ်လမ်းသဘောလား၊ အပြင်လောကမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ငြင်းလို့မရဘူးဗျ။ ကျနော် ကြက်မတစ်ကောင်မှာရေးထားတာကတော့ရှေ့ပိုင်းက ဇာတ်လမ်း ဆင်ပြီးရေးထားတာ ၊နောက်ပိုင်းလေးသာ အမှန်ပါ။
ကိုကြောင်လေး ရေ . အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်နေတာပါ.. ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာဘဲအငယ်ရွာ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်ချင်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
။ အောက်မှာ MTY က အထင်တွေလွဲနေပါပြီ။ ဒီလိုတစ်ယောက်ယောက် က ရေးလာမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပြီးသားပါ။
ကျွန်တော် ဒါရေးပြီးတင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အပြင်လောကမှာ အခက်အခဲရှိနေသူတွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာရယ်၊ မလွဲသာ မရှောင်သာ ဘ၀ပေးအခြေအနေကြောင့် မလုပ်ချင်သော်လည်း ဒီဘ၀ထဲကိုရောက်သွားသူများရှိကြောင်းသိစေချင်တာပါ။
အမေကိုယ်တိုင်က လုပ်ခိုင်းတာ၊ မိထွေးက လုပ်ခိုင်းတာကို သိသိချည်းနဲ့ မျက်နှာလွှဲထားတဲ့ ဖခင်တွေရှိတာ။ အများကြီး အများကြီးပါ။ ပိုက်ဆံတောင်းကောင်းအောင် လိမ်ဆင်တွေမဟုတ်ဘဲ တစ်ကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေ၊ သာမာန်လူတွေ အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပျက်နေတာ တွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တာပါဘဲ။
ဖြေရှင်းနည်းလည်း ဘယ်လိုပေးကြမလဲ သိချင်တာပါ ပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် အမေကလည်း သည်းညည်းခံပြီး အဆောင်မှာပဲ ဖြစ်သလိုနေပေးသင့်ပါတယ်။
တကယ်သာ ဘ၀ကို ရိုးရိုးသားသားရုန်းကန်ချင်ရင် ရွှေပြည်သာက မြိုင် သီလရှင်စာသင်တိုက်လိုမျိုးမှာ အကူအညီသွားတောင်းပြီး သွားနေလို့ရပါတယ်။ကပ်စားနေလို့တော့ မရဘူးပေါ့။
ကိုယ်ကလည်း ၀င်ငွေမှန်အောင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးပါ အန်တီပဒုမ္မာ ။ အဲ့ဒီလို သီလရှင် ကျောင်းတွေက လက်ခံရင်တော့ အလွန်ကောင်းတာ အမှန်ပါဘဲ။ သူတို့ကော မသိတဲ့ သူဆို လက်ခံပါသလား။
ကျွန်တော် ကြားဖူးတာ တစ်ခုရှိပါတယ်
မိန်းကလေး တွေက ဆင်းရဲ ဒဏ် မခံနှိုင်ကြပါဘူး၊ ယောင်္ကျားလေးတွေက ချမ်းသာတဲ့ ဒဏ် မခံနိုင်ကြပါဘူး တဲ့ …..
ဘာပဲ ပြောပြော အဲလိုတော့ မလုပ်သင့်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ် …
သူ့ထက် အခြေ အနေ ဆိုးတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ..
အဲဒီ လူတွေတောင် သူ့လို မစဉ်းစားဘဲနဲ့ ဖြေရှင်းသွားကြတာတွေ ရှိပါတယ် …
မိဘမဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် နို့မှုန့်တိုက်ပြီးမွေးပေးတဲ့ ကရုဏာရှင်တွေပါ။
ဒါပေမယ့် ကထူးဆန်းရဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ သူ့အမေ အကြောင်းဖတ်ရတာ ၃သိန်းအလွယ်ရတဲ့ နည်းပဲလိုက်မယ့်ပုံ
လို့ ထင်မိပါရဲ့။ရတာလေးနဲ့ ချွေတာနေမယ့်ပုံ မထင်။နေရေးတောင် ဟိုမှာမဖြစ် ဒီမှာမဖြစ် ဂျီးများနေတာလေ။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေရင်.. ဘာသာရေးကကယ်မယ်လို့ ထင်မိတယ်.။
လက်တွေ့ကျကျ.. ချခ်ျ့ ..ဘုရားကျောင်းတွေက.. ဘုံကျောင်းတွေ.. ကွန်မြူနတီစင်တာတွေက ကယ်မှာလို့ထင်တယ်..။
အခုခေတ်တော့.. စေတီပုထိုးကြီးတွေ..မြင့်မားထိုးထောင်များပြားအောင်လုပ်.. အဲဒီကထုံးသင်္ကန်း..အဲဒီကနေ.. ရွှေရောင်..အဲဒီကနေ..ရွှေအစစ်.အဲဒီကနေ.. စိန်ဖူးတော်..အဲဒီကနေ..ကျောက်မျက်ရတနာတွေ.. အဲဒီကနေ.. အဲဒီကနေ..အဲဒီကနေ.. မဆုံးနိုင်အောင်အားစိုက်နေတာနဲ့..ငွေအရင်းအမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေတာမို့.. ဒီလို ပုဂ္ဂလိကရေးရာတွေ.. လှည့်ကြည့်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး.
လူတွေကလည်း.. ငါးပါးသီလသာတွင်တွင်အော်နေကြတာ.. လူလူချင်းလုံးဝယုံကြည်လို့မရတာမို့.. ဘာမှန်းမသိတဲ့သူကို.. ယုံရအင်မတန်ခက်တဲ့..ညခေါ်တင်ထားဖို့..မလုပ်ရဲလောက်တဲ့.. ခေတ်ကြီးမဟုတ်လား…
မြန်မာ သောင်းချီနေတဲ့.. အယ်လ်အေမှာ.. ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၁ကျောင်းရှိပေမဲ့.. နယ်က..တခြားနိုင်ငံက..ရောက်လာတဲ့သူတွေ အလွတ်တည်းကြဖို့.. အခန်းလွတ်တခုမှမရှိဘူး.. ပေးမသုံးဘူး..။
ဘုန်းကြီးကျောင်းအလှူပွဲ..ဘာပွဲတွေမှာ.. လူ၁၀၀ကနေ..၄-၅ရာလွယ်လွယ်လာကြ..စုနိုင်ကြပေမဲ့.. ဇာဂနာစကားပြောပွဲ.. စာပေဟောပြောပွဲ.. လူ ၁၀၀ စုရဖို့အင်မတန်(အင်မတန်)ခက်တယ်..။
လာမဲ့နိုင်ငံတော်သစ်မှာ..ထူထောင်ချင်ရင်..ဒီကိစ္စတွေ.. သေသေချာချာ… စဉ်းစား..အဖြေထုတ်သင့်တယ်လို့.. ထင်မိတယ်..
မြန်မာတွေ.. ဘာသာရေးဖက်အားစိုက်..ငွေစိုက်..လုပ်လွန်းအားကြီးနေတာကို.. နိုင်ငံတကာ.. ပညာရှင်တွေခေါ်ပြီး… ဆွေးနွေးပွဲတွေ.. အရေးတကြီး(အရေးတကြီး)ဆွေးနွေးသင့်နေပြီထင်မိပါတယ်..။
ဒါဟာ..မြန်မာပြည်ရဲ့.. ဘ၀ပျက်ခဲ့တဲ့..ပျက်နေတဲ့..ပျက်လတံ့သော.. အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေ ဘ၀..ကယ်တင်ဖို့အတွက်.. အခြေခံကျကျ ကူညီခြင်းပဲ…။
လို့ပြောရင် သင့်တော်မလားမသိဘူးခင်ဗျ၊ ဘာသာရေးကိုမလုပ်ရဘူး လို့ နောင်လာနောင်သားတွေ သဘောပိုက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေများနေတာကိုလျှော့ ရမှာပါ။
ဘာသာရေးကို လုပ်သင့်တဲ့အတိုင်းအတာအထိလုပ်ဖို့လဲ လိုပါသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို သေချာသိအောင်လေ့လာပြီး မှန်ကန်တဲ့ဘာသာရေးကိုလုပ်ရင်
ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ် အကျဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း။ (ကျနော့အမြင်လေးပါ)
လက်မ ၂ ချောင်း ထောင်ပြီး သဂျီး အဆိုကို ၁၀၀% ထောက်ခံပါတယ်။
အဲဒါပေ့ါ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘုရားက ကိုယ့်ထက်ချမ်းသာပါတယ်။ ဘုရားကို လှိမ့်ရွှေချနေမဲ့ အစား လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေ မှာသုံးသင့်ပါတယ်။ အမျိူးသမီးတွေ၊ ခလေးတွေ၊ ဆင်းရဲကျပ်တည်းသူတွေ …
ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့်လူမျိုးမဆို လိုသောအချက် ရှိစမြဲပင် ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို ပပျောက်အောင် ပြုလုပ်ရန် ခဲယဉ်းသော်လည်းမည်သည့် အချက်တွင် လိုသည်ဟုသိလျှင် ပြုပြင်ရန် လမ်းရှိပေသည်။ အရှေ့နိုင်ငံသားတို့သည် စည်းကမ်းသေဝပ်ခြင်းကို နားမလည်သည်မှာ အများအသိပင်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဂျပန်တို့သည် ကမ္ဘာ့ရှေ့တန်းသို့ရောက်ရန် ကြိုးစားရာ၌ ထိုအချက် အရေးကြီးပုံကိုသိသဖြင့် စည်းကမ်းသေဝပ်ဆုံးသော လူမျိုးတစ် မျိုးဖြစ်သည်ဟု တစ်ကမ္ဘာလုံးကပင် ချီးမွှမ်းခြင်းကို ခံရလေသည်။
မြန်မာလူမျိုးတို့ လိုအပ်သောအချက် တစ်ရပ်မှာ လွယ်သောလမ်းကို လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒုက္ခမခံလို၊ သည်းခံလို၊
မစွန့်စားလို၊ သို့ရာတွင် ဒုက္ခမခံလို သောလူမျိုး။ သည်းမခံလိုသောလူမျိုး၊ မစွန့်စားလိုသောလူမျိုးတို့သည် မည်သည့်အခါမျှ မကြီးပွားခဲ့ကြ။ ရှေးကမြန်မာတို့သည် ဒုက္ခခံနိုင်ကြသည်။ စွန့်စားခဲ့ကြသည်။ ကြီးပွားခဲ့ကြသည်။ ယခုမြန်မာတို့၌ ထိုစိတ်ဓာတ်မျိုး တဖြည်းဖြည်း ပပြောက်လာပြီးနောက် ယခုခေတ်တွင်တဖန် ပြန်လည် ၍ စိတ်ဓာတ်သစ်များ ပေါ်ပေါက်စ ပြုလာလေပြီ။
ပညာတတ်မြန်မာ လူငယ်များသည် လွယ်သောလမ်းကို လိုကြသည်။ ထူးချွန်သော(သူများနှင့်မတူသော) လုပ်ငန်းသစ် အကြံသစ်မကြံလိုကြပေ။
အခြားအချက်တစ်ရပ်ကား ကိုယ့်ကျိုးငဲ့လွန်း ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးဆောင် သူတို့သည်အများအကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ပါသည်ဟုဆိုကြသော်လည်း ကိုယ်ကျိုးကိုသာ အဓိကထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပေသည်။
အခြားအချက် တစ်ရပ်ကား ဘာသာရေးကို အထူးလိုက်စား ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးသည်လူတို့စိတ်ဓာတ်ကို နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တကေားမွန်စေခြင်း၊ တမလွန်၌ ကောင်းရာသို့လားစေခြင်း၊ စသည်တို့ကိုကောင်းစွာ ယုံကြည်ပါသည်။
အခြားအချက် တစ်ရပ်ကား စီးပွားရေးကို လစ်လျူရှုခြင်း ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးကို မြန်မာ တို့လောက် ဂရုမစိုက်သောလူမျိုးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိမည်မထင်။ အဝင်အထွက် ကို မျှတအောင် မသုံးစွဲတတ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးမူလအခြေခံများ မလေ့လာခြင်း၊
စီးပွားရေးသည် အခြားအရေးများထက် အရေးကြီးကြောင်း ကို မသိခြင်း၊ အခြားလူမျိုးတို့ရဲ့လုပ်ငန်းများကို အတုမခိုးတတ်ခြင်း၊
စသည်တို့သည် အလွန်အရေးကြီးသော ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ကြလေသည်။
အခြားချို့ယွင်းချက် တစ်ရပ်မှာ ဝန်တိုမိစ္ဆရိယ စိတ် များခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သူတစ်ဦးကောင်းစား လျှင် မနာလိုခြင်း၊ မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်ခြင်း စသောစိတ်တို့သည် မြန်မာ တို့၌ရှိကြသည်။
ချီးမြှောက်သင့်သောသူကို ချီးမြှောက်ရခြင်းသည် မင်္ဂလာ တရားတော် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ကို လစ်လျူပြု၍ ချီးမြှောက်သင့်သောသူကို မချီးမြှောက်ခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့သင့်သောသူကို အလွန်အကြူးကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာ ၌ အလွန်များလျက်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်မြန်မာ တို့၌ ခေါင်းဆောင်ကောင်း မပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ ထူးချွန်သူ ခေါင်းပါးခြင်း၊ စွန့်စားလိုသူ နည်းပါးခြင်း တို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သည်။
အထက်ပါအချက်များ ကို သတိမူကြ၍ ပြင်ဆင်နိုင်ပါမူ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းသည် ခရီးတွင်ပေလိမ့်မည်လော…….။
ဇာတ်လမ်း လေး က ထွက်ပေါက် မရှိသလောက် ကို အသေအချာပိတ်ထားသလို ဘဲ။
ပြသနာက ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းပြီး “ငါသာဆို” ဆိုတဲ့ စိတ် နဲ့ ဝေဖန်အကြံပေးသင့်/မသင့် တွေးမိနေလို့။ လူတစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် မှာ အခြေခံတွေးခေါ်ပုံ မတူတဲ့ အတွက် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ နဲ့ သူလုပ်ချင်တာ ကွဲ မှာမို့ပါ။
အမပဒုမ္မာ ဆွေးနွေး ခဲ့တာလေးကို အတော် သဘောကျမိတယ်။
ပြောရရရင်တော့ ဒီကိစ္စမှာ အစိုးရမကောင်းလို့ ကလဲ တစ်ကြောင်းပေါ့။
အရီး ကတော့ သူ့အမေ ကို စိတ်နဲနဲ တိုတယ်။
မရှိတဲ့အချိန်မှာ ဘာကိုမှ အရိုးများသလေး ချီးခါးသလေး လုပ်လို့မရဘူးလေ။
ကိုယ်ကလဲ နေမကောင်းတာတော့ နေမကောင်းတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အနဲဆုံး ကိုယ့်ဝန်ကိုယ်ထမ်းနိုင်အောင်တော့ ကြိုးစား ရမှာဘဲ။ အလုပ်မလုပ် နိုင်အောင် အသက်ကြီးတာ မဟုတ်ရင် သူလဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုမယ်။ အနဲဆုံး သူများအိမ်မှာ နေပြီး အကူ လုပ်ရင်တောင် နေစရာ၊ စားစရာ ရပါတယ်။
ဒီလို အလုပ်တွေ က အမြဲတမ်း တံခါးပွင့်နေတာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို သူများအိမ်မှာလဲ အချောင်ခို နေမယ် ဆိုရင်တော့ နှင်ချခံရမှာဘဲ။ တကယ်တော့ သမီး မကောင်းတဲ့ မိန်းမ ဘဝ နဲ့ လူဖြစ်ရှုံးမှာကို တွေးမိ ရင် ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီး အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာက ခွန်အား ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ နောက်ဆုံးအလွယ်ရ ထွက်ပေါက် ကိုဘဲ ကြည့်နေရင်တော့ တခြား နဲနဲ ကြိုးစားရပြီး တွန်းဖွင့် ရမဲ့ တံခါး တွေ ကို အားစိုက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
တကယ်အလုပ်မလုပ် နိုင်ရင်လဲ အစ်မပဒုမ္မာရဲ့ အကြံ သီလရှင်ကျောင်းတွေမှာ တောင်း ပန်ပြီး နေလို့ရမှာပါ။ အဲဒီမှာလဲ ကူညီ လုပ်ဖို့ ကိုလဲ မေ့ချင်ယောင်ဆောင် နေလို့ မရ ပါဘူး။ ဒါက အမေ ကို အကြံပြုတာပေါ့။
သမီး ကို ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထား တဲ့ စိတ်ကလေး ကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆက်ထိန်းသွားဖို့ ကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒီကနေဆက်တွေးရင် တကယ်လို့ များ ဆိုကြပါစို့။
ကိုယ်ခန္တာ ကို အဲလို ရောင်းစားလို့ မရဘူး။ ဘယ်သူမှ မဝယ်ဘူး။ ဆိုပါစို့။
ဒီလိုဘဲ တကယ် အငတ်ခံ မှာလား။
မရ ရတဲ့ အင်အားနဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာထွက် မှာလား။
အမှန်က အဲဒီလို မရှိဆင်းရဲ ထွက်ပေါက်ပိတ်လုလု ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကို ငွေပေးဝယ် ကြတာ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်လို ဆင်းရဲ ချမ်းသာ အရမ်းကွာဟ နေတဲ့ ချစားနိုင်ငံ တွေမှာဘဲ ဖြစ်တာ များပါတယ်။
ဘယ်ကဘယ်လို ရမှန်းမသိတဲ့ ငွေတွေ နဲ့ ပိုက်ဆံ ကို ဘယ်လိုဖြုန်းရမယ် တွေးနေရတဲ့ သူတွေ ဘဲ ဒီလိုလုပ်ပါတယ်။ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကို မိန်းကလေး တွေကလဲ Plan A ကို မကြိုးစား တော့ဘဲ၊ လွယ်ရာ Plan B ကို ရွေးကြ တော့ ကြောင်ခံတွင်းပျက် နဲ့ ဆက်ရက်တောင်ပံကျိုး ဇာတ်လမ်းပေါ့။
အမှန်တကယ် နဲနဲ ပိုကြိုးစားရတဲ့ အလုပ်ပေးရင်ရော သူတို့ စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်လား။ ရွေးမယ်ထင်လား။ ဒါကတော့ ကာယကံရှင် တွေ သူတို့စိတ် နဲ့ ဘဲ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါမယ်။
နောက်တစ်ခု က အဲဒီ စပွန်ဆာ ပေးသူများ ကို အသိတရား ပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ဒီမှာ ကျွန်မ နမူနာ တစ်ခု ပေးလိုပါတယ်။
အခု UK မှာ စီးကရက်သောက်သူ နဲ နိုင်သမျှ နဲအောင် ကို အစိုးရက ပါဝင်ဆောင်ရွက် ပါတယ်။
အရင်နှစ်တွေကစလို့ ဆေးလိပ်ကို ရုံးအဆောက်အဦ တွေ၊ စားသောက်ဆိုင် တွေ အထဲ မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ကို တရားဝင် တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သောက်ချင်ရင် အပြင်ကို ထွက်သောက်ပေါ့။ ဒီတော့ တော်ရုံ စွဲသူတွေ က ဒုက္ခခံပြီး အပြင်ထွက် မသောက်တော့ဘူး။ ဒီတော့ တော်ရုံလူတွေ ဆေးလိပ်ပြတ် ကုန်ပါတယ်။
ကျောင်းတွေမှာ ဆေးလိပ် မကောင်းကြောင်း သင်ခန်းစာတွေ ကောင်းကောင်း ပေးတော့ အိမ်မှာ မိဘ က မသောက်ရင် အပြင်မှာလဲ သောက်ဖို့ ကြိုးစားကြတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆေးလိပ် ကို ၁၈နှစ်အောက် ဝယ်ခွင့် မပေးပါဘူး။
ဆေးလိပ်ဘူး တွေပေါ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ရင်အဆုတ်ပျက်စီး ကြောင်း စာတန်း နဲ့ ပုံ ပါပါတယ်။ မကြောက်ရင်သောက်ပေါ့ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
ဒီနှစ် မှာတော့ UK ကိုသွင်းမဲ့ ဆေးလိပ်ဘူးခွံ တွေဟာ ဘာမှဆွဲဆောင်မှု မပါတဲ့ ပြောင်စက္ကူ နဲ့ သာဖြစ် ရပါတော့မယ်။ ဒီတော့ လှတယ်။ သောက်ချင်စရာလေး ဆိုတာ မရှိတော့အောင်ပေါ့။ ဆေးလိပ် အတွက် အခွန်တိုး ကောက်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီမှာ ဆေးလိပ်သောက်သူများဟာ – ပညာတတ် တွေ၊ လူနေမှု အဆင့်မြင့်တဲ့ သူတွေ မှာ ထဲ မှာအတော်ရှားလာပါတယ်။ ရှိရင်တောင် အသက်ကြီးပိုင်း လက်ကျန်တွေ များပါတယ်။ ဘာဖြစ်လဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သောက်တာ ဆိုပြီး ဘဝ အတွက် ရည်ရွယ်ချက် မရှိတဲ့လူတန်းစား လက်လုပ်လက်စား လူနေမှု နိမ့်ကျတဲ့ သူတွေ နဲ့ အဲဒီ ပါတ်ဝန်းကျင်က ကလေး တွေ သောက်ပါတယ်။ သာမာန် စဉ်းစားနိုင်သူ တွေ ကတော့ ပညာပေး ပံ့ပိုးမှု တွေ အောက်မှာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တတ်လာကြပါပြီ။
ဒီတော့ ကာ မြန်မာပြည်မှာလဲ တတ်နိုင်သ၍ လူမှုရေး အသိတရား တွေကို စေတနာ အပြည့် နဲ့ ဦးဆောင်ပံ့ပိုးမှု ပေးတဲ့ အဖွဲ့ကြီးတွေ ရှိဖို့ လိုလာပါပြီ။ ငွေပေးပြီး အလွယ် ဖျက်စီး မဲ့ သူများ ကိုလဲ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်အောင် ပညာပေး တွေ လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးဖို့ လိုနေပါပြီ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း ကိုလဲ ဖြစ်နိုင်သမျှ တိုးချဲ့ပေးနိုင် ရင်တော့ အဲဒီ ဘဝကို ရေကြုံလိုက် ဇာတ်လမ်း တွေ လုံးလုံးပပျောက် မယ်လို့ မမျှော်မှန်း နိုင်ပေမဲ့ နဲသွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုကျော်သူရဲ့.. လူမှုရေးအဖွဲ့ကြီးက.. လူတွေထောင်..သောင်းကို.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေဖွင့်ပေးထားတာ.. သတိပြုမိတယ်..။
မကြာခင်လတွေမှာ.. သူတို့စုံတွဲ.. ယူအက်စ်လာမယ် ကြားမိတယ်..။
အလှူတွေအများကြီးရဦးမှာပါပဲ.. (သံဃမဟာနာယကက.. ဆရာတော်ကြီး ယူအက်စ်မှာအလှူရတာရဲ့.. ၁၀ပုံ၁ပုံလောက်ပေ့ါလေ…။ )
ငွေလည်ပါတ်မှုရော.. အသုံးပြုပုံပါ.. စံနစ်ကျ..မှန်ကန်နေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်..။
ဗုဒ္ဓစွယ်တော်ဆိုတာ..နိုင်ငံခြားက ကြွလာလို့.. ကျပ်ငွေ ၁သောင်း၁သိန်း၁သန်း.. အနှောင်အဖွဲ့မပါ.. လှူပစ်လိုက်ဖို့ ၀န်မလေးသူမြန်မာအမျိုးကောင်းသားတဦးဟာ.. ကိုယ်ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်း..ပါတ်ဝင်းကျင်မှာ.. ဘ၀ပျက်လုဆဲဆဲ.. မိသားစုတခုကို.. အနှောင်အဖွဲ့မပါ… ၁သောင်းပေးပစ်ဖို့ သဒ္ဒါသလား…။ ပေးပစ်လှူပစ်ရဲသလား…။
သူကြီးမေးခွန်းကို ကိုပေကတော့ ဖြေပေးပြီးပါပြီ။
ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာပါတယ် ကိုပေ ရေ။ ကိုပေ့စိတ် သဘောထားသိရလို့။ ဘဖောပြောသလိုဘဲ ဒုက္ခရောက်သူများစွာရှိလို့ တစ်ဦး တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘဲ လူအများစုကို ကယ်တင်နိုင်မဲ့ လမ်းရှာကြရမှာပါ ။
သူကြီးရယ် အဲလောက်ငွေကတော့ ပြောပြန်ရင်လည်း
မင်းကပေါနေတော့ ပေးနိုင်တာပေါ့လို့ အပြောခံရဦးမယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ် ကပဲ ။
ကောင်လေးတစ်ယောက် နိုင်ငံခြားမှာ ကျောက်ကပ်လဲပြီး ဆေးကုခံရင်း ။
အပြန် လေယာဉ် လက်မှတ်ဖိုး မရှိတော့ပဲ ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်နေတယ် ဆိုလို့ ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး လှူပါအုန်း ဆိုလို့ ။
ဒေါ်လာ ၁၅၀ လှူ လိုက်တယ် ။
အဲဒီကောင်လေးကို မြင်ဘူးဖို့ဝေးစွ ။
နာမည် ၊ နေရပ် ၊ အသက် ၊ ဘာတစ်ခုမှမသိပါဘူး ။
ပြန်ရတာဆိုလို့လည်း ၊ အဲဒီ သူငယ်ချင်းက ဖုန်းထဲကပဲ ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ ၊
” အဲလိုလှူတဲ့အတွက် ၊ မင်းကျောက်ကပ်လည်း ကောင်းပါစေကွယ် ”
ဆိုတဲ့ စကား တစ်ခွန်းပဲ ကြားခဲ့တာပါ ။
အဲဒီကောင်လေးက စိတ်ထားကောင်းတဲ့ ကောင်လေး ဖြစ်ပါစေကွယ် ။
ဘုရားအမ၊ ကျောင်းအမ၊ ဘုရားဒကာ၊ ကျောင်းဒကာ နာမယ်ခံပြီး ဆွေမျိုးတွေထဲမှာ ငတ်ပြတ်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ပစ်ထားသူတွေတစ်ပုံကြီးပါ။
ဒီလိုသူမျိုးတွေရဲ့လားရာကတော့ တုံးပေါ်ဇက်တင်ပြီးတော့တောင် လောင်းလိုက်ချင်သေးတယ်…
အရီးလတ်ရေ .. အရီးလတ်ပြော သလိုဘဲ ငါသာဆိုနဲ့ တွေးမရတာတွေ အများကြီးဘဲ။
သူတို့ကိုယ်နိုက်က ကြိုးစား အားထုတ်မှု့ ရော့ရဲတာ။ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား မရှိတော့တာတွေ။ အားလျော့ အရှုံးပေးတာတွေနဲ့ ဆိုတော့ ပြောရခက် တာတွေလည်း အများကြီးပါ။
စားလောက်သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်းတွေ လိုအပ်တာလည်း အမှန်ဘဲ။
ရှင်။ တကယ်ကောင်းရင် ရိုင်းပင်းကူညီတတ်တဲ့ ဆွေမျိုး ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းက ပစ်ထားမယ် မထင်ပါ။
မြန်မာယောက်ျားတွေ.. အပျိုစင်ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားတယ်… ဆို…..ဆို… ဆို…”
သဂျီးကတော့ ပြောရော့မယ် ။ ယောက်ျားတွေဟာ အပျိုစင်ဘဝ ကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားထား ၊ ကိုထူးဆန်း အဖြစ်ထဲကလို မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ ကြုံရင်တော့ ၊ ဈေးကို အောက်ကြေးနှိုက် နင်း ကြမှာ အမှန်ပါဘဲ ။
ကိုထူးဆန်းရေ ၊ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီလိုက်ကြရအောင်လားဗျာ ။
ကျုပ်တို့ ဂေဇက် က လူပျိုကြီးတွေ ပေါသား ။ တစ်ယောက် တစ်သောင်းလောက် ဝိုင်းဝန်း အလှူဒါန ပြုကြရရင် ဘယ်နှယ့်တုန်းဗျ ။
အဲဒီ ကောင်မလေးကိုပြောပေးပါ။ တကယ်ဒုက္ခ ဖြစ်နေတာဆိုရင် အဲဒီ ၃၀၀၀၀၀ ကျွန်တော်ကူညီပါမယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားပါ။ စေတနာ သန့်သန့်နဲ့ပါ။
ကျွန်တော်က သူဌေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်အမှန်တကယ် ဆိုရင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ မိန်းကလေးရဲ့ ချစ်သူနေရာမှာ မင်း ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ … ?
ငါသိတဲ့ အဖြစ်လေးထဲက မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဆိုရင် သူတို့ မိသားစုက ပြောလောက်အောင် ကျပ်တည်းနေတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သုံးသိန်းနဲ့ သူ့ရဲ့ အပျိုစင်ဘဝ ကို လဲစားခဲ့ပါတယ်…။
အဲလို လဲခဲ့တာကလည်း သူ့စိတ်နဲ့သူ မဟုတ်ဘူးနော် …
မိဘတွေက အတင်းအကျပ် စေခိုင်းလို့ …..
အဲလို မိန်းကလေး မျိုးတွေလည်း ရှိသေးတယ်ကွယ် …..
အခုခေတ်တော့.. စေတီပုထိုးကြီးတွေ..မြင့်မားထိုးထောင်များပြားအောင်လုပ်.. အဲဒီကထုံးသင်္ကန်း..အဲဒီကနေ.. ရွှေရောင်..အဲဒီကနေ..ရွှေအစစ်.အဲဒီကနေ.. စိန်ဖူးတော်..အဲဒီကနေ..ကျောက်မျက်ရတနာတွေ.. အဲဒီကနေ.. အဲဒီကနေ..အဲဒီကနေ.. မဆုံးနိုင်အောင်အားစိုက်နေတာနဲ့..ငွေအရင်းအမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေတာမို့.. ဒီလို ပုဂ္ဂလိကရေးရာတွေ.. လှည့်ကြည့်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး.”
သူကြီးရေ .. ပွဲစားတွေ .. ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့ ခေါင်းတွေက ၅၀ %
ကိုကြောင်လေး ရေ . အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်နေတာပါ.
ယူရေးတဲ့စာတွေအားလုံးကို သုံးသပ်ကြည့်တော့ ယူလဲ ဆရာကြီးဘဲ.. ယူနဲ့အနီးစပ်ဆုံး
အကြောင်းအသိဆုံးဆိုတော့ ယူက ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်သလဲ ဒို့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ အလားတူ
ကိစ္စတွေ အများသာ၊ ဒို့အပါဝင် လူတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်သောကနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်ပြသနာ
နဲ့ ကိုယ်တွေချည့်ဘဲ။ တခုဘဲသိချင်တယ် ယူကဘာတုံး……
ဟုတ်ပါ့ လိပ်စာလေးဘာလေး ထည့်ပေးသင့်တာပေါ့ တစ်ကယ်ဆိုရင်…။ ဘာဘာညာညာ စိတ်မပါပါဘူး …။ တစ်ကယ်အဖြစ်အပျက်လား အကြားလား စိတ်ကူးလား ဘယ်တုန်းကလဲ ဘယ်မှာလဲ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာမျိုး စိတ်ဝင်စားလို့ပါ…။ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ မတတ်နိုင်ပေမဲ့ အများအားနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…။ တစ်ကယ်သာ မှန်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ…………
ကဲ သူကြီးရေ .ကိုယ်ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်း..ပါတ်ဝင်းကျင်မှာ.. ဘ၀ပျက်လုဆဲဆဲ.. မိသားစုတခုကို.. အနှောင်အဖွဲ့မပါ… ၁သောင်းပေးပစ်ဖို့ သဒ္ဒါသလား…။ ပေးပစ်လှူပစ်ရဲသလား…။အဲဒီမေးခွန်းကို.. ဖြေကြည့်စေလိုတာပါ…။
သူကြီးမေးတဲ့ မေးခွန်းဖြေသူ နှစ်ယောက်ရသွားပြီ။
ကိုမင်းဇော်ရေ . ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .။ အခုလို စာနာ နားလည်ပေးတဲ့ အတွက်။
သို့သော် ကျွန်တော်သည် အသိတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အား ခံစားနားလည် ပြန်လည် တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပြီး အလူခံတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် အဲ့ဒီ့ကောင်မလေးအတွက် ကိုမင်းဇော်ရဲ့ အကူအညီ လက်ခံပေးလို့ မရတာ စိတ်မရှိပါနဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
ကိုမင်းဇော်ကိုတစ်ခု သတိပေးလိုတာကတော့ အရမ်းကြီးလည်း လူတိုင်းကို အယုံအကြည် မရှိဖို့ပါ။ internet ပေါ်ကနေ လိမ်စားသူများ ရှိတတ်တဲ့ အတွက် အရမ်းမယုံကြည်ပါနဲ့။
ဒီဂေဇက်က အိတုန်တို့ယခင်အလူ၊ ယခု ဆူးတို့ မမတို့လို အစုအဖွဲ့နဲ့ အားလုံးပါဝင်လုပ်ကိုင် လူဒါန်း၊ ထင်သာမြင်သာအောင် လုပ်ပြီး အလူခံတာက လွဲရင် တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်းကို ယုံကြည်ပြီး လက်မလွယ်မိပါစေနဲ့။
ကိုနေ၀န်းနီနောက်တစ်ယောက်တိုးပါသည် သူကြီးရေ။ :grin:
အဖြစ်အပျက်ကတော့ အမှန်ပါ။ ဒီလောက်သာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါမယ်။
အင်း ကျေးဇူးပဲ ကိုထူးရေ။ မသိပါဘူးဗျာ ကျုပ်တို့က တောသားကိုးဗျ။ အစုအဖွဲ့နဲ့လုပ်တဲ့ အလှူမျိုးဆို
ပိုပြီတောင် ဝါသနာပါ ပါသေးဗျာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိုမဆို လိုအပ်ရင်တတ်နိုင်သလောက်
ကူညီဖို့အသင့်ပါပဲ။ အဲ တတ်နိုင်တဲ့ အချိန်ထိပေါ့ဗျာ။
အဲ ကိုထူးပြောတာအမှန်ဆိုရင် ကိုထူးရဲ့ အသိကတဆင့်ပြာပြပေးေါ့ဗျာ။
ဆိုလိုတာက တကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေရင် ပေါ့။
မဟားပါဘူး ကိုမင်းဇော် ။ ကိုမင်းဇော် ရဲ့ စေတနာကို လေးစားသဘောပေါက်ပါတယ်။
ဂေဇက်ထဲ ၀င်လာတဲ့ အတွက်လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကဒီတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး ၊ ကယ်ချင်၇င်တောင်လက်မလယ်လောက်ဘူး ။
မြို.သစ်တွေက အပေါင်ဆိုင်ရှေ.မှာ ခဏလောက်သွားထိုင်ကြည်.ရင် တော်တော်လေးသိသွားနိုင်တယ် ။
ကျွန်တော်မစာနာလို.ပြောတာမဟုတ်ဘူး ။ ကျွန်တော်ကအမြဲတန်းတောရွာတွေ၊ဆင်ခြေဖုံးတွေသွားနေရတာ
အခုပြောနေတဲ.လူတန်းစားတွေနဲ. အမြဲလက်ပွန်းတတီးနေ နေရတာ ၊ ကျွန်တော်တွေ.ဘူးတဲ.မြို.သစ်က
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုရင် ညနေဘက်အော်ဒါလိုက်ဖို.အသွား ယောက်ကျားကလိုက်ပို.တာ။
သူ.မှာခလေးနှစ်ယောက်လဲရှိတယ် ။အဘဖောရိန်းပြောသလိုပဲ ကယ်လို.မနိုင်ဘူး ။
ဒီမြင်ကွင်းမျိုးတွေတကယ်မြင်ချင်ရင် နေရာတစ်ခုပြောလိုက်မယ် …..ည(၈)နာရီလောက်မှာ အနော်ရထာ
လမ်းနဲ. ရွှေတဂုံဘုရားလမ်းဒေါင်.သိမ်ကြီးဈေး(D)ရုံအောက်က ပလက်ဖောင်းဘေးလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို
သွားကြည်. ၊ အဲဒီမှာ ကလေးအမေကနို.တိုက်ပြီး ယောက်ကျားလက်ထဲကိုခလေးအပ် ၊ပြီးရင် ကလပ်ပေါ်
တက်ပြီးဈေးကွက်ရှာတာတွေရလိမ်.မယ် ။အဲဒီယောက်ကျားမျိုးကို ဘယ်လိုသဘောထားကြရမလဲ
အတော် ဂွကျတာဘဲနော ….။
လေးစားပါတယ် ကိုမင်းဇော်နဲ့ အဘနီ။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုကိစ္စတွေက များသောအားဖြင့် တစ်ခါ ငွေပေးကူညီရုံနဲ့ ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။
အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများစီစဉ်ပေးနိုင်မှ ပြေလည်မယ့် ရေရှည်ကိစ္စပါ။
အခု ၃ သိန်းပုံပေးလည်း သူတို့ အလုပ်မလုပ်ရင် နောက် ၆လ မှာ ဒီပြဿနာ ထပ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ကိုင်စားချင်သူအတွက် အလုပ်မရှားဘူးလို့ (တနည်းပြောရရင် ထမင်းမငတ်နိုင်ဘူးလို့) ပြောချင်ပါတယ်။
သဂျီးပြောသလို လူတစ်ယောက် အမှန်တကယ် ဒုက္ခရောက်နေတယ်၊ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ၁၀၀၀၀ ကူညီရတာ ၀န်မလေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မကြာခဏ အခက်အခဲ ဖြစ်မနေဖို့တော့ လိုတာပေ့ါ။
ရေရှည်မှာတော့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမှသာ အဆင်ပြေမှာပါ။
်အောက်ဆုံးအဆင့် အိမ်တွေမှာ အ၀တ်လျှော် မီးပူတိုက် လာလုပ်ပေးတဲ့လူတောင် မိသားစု ထမင်းမငတ်အောင် နေနိုင်ပါတယ်။
အဲ- ကိုယ့်အလုပ်ကိုတော့ သူများခိုင်းချင်စိတ်ရှိအောင် ပြီးပြီးရော မလုပ်ပဲ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ဒါမှမဟုတ် အိမ်ဖော်လုပ်ရင်တောင် အိမ်ရှင်က ထမင်းကျွေး၊ နေစရာပေးလို့ စရိတ်ငြိမ်း အနည်းဆုံး တစ်လ ၃၀၀၀၀ ရနိုင်ပါတယ်။
(တကယ် ရိုးရိုးသားသားနဲ့ လုပ်ချင်ရင် ခေါ်ချင်တဲ့ အိမ်တွေအများကြီးရှိလို့ ဆက်သွယ်ပေးလို့တောင်ရတယ်။
အနှိပ်စက်ခံရတာ၊ မတရား အခိုင်းခံရတာမျိုး မဖြစ်စေရဘူးလို့ အာမခံနိုင်တယ်။
အိမ်ဖော်သက်ရင့်ပြီး ချက်တတ် ပြုတ်တတ်နဲ့ အိမ်ရှင်စိတ်ချရတဲ့လူဆိုရင် ၆၀၀၀၀-၇၀၀၀၀ လောက်ထိ ရတတ်ပါတယ်။
ဒါတောင် အားကိုးရလို့ အိမ်ရှင်ဘက်က ကြားပေါက်ပေးတာ အ၀တ်အစား ရွှေထည် ဆင်တာတွေ မပါသေးဘူး။
အိမ်ဖော်လုပ်တာ အောက်ကျတယ်ဆိုရင် အခုလို အလွယ်လိုက်တာက ပိုပြီး အောက်မကျပါဘူးလား။
ပညာမတတ်လို့ အိမ်ဖော်လုပ်ပြီး နယ်က မိဘတွေကို လယ်တွေ မြေတွေ ၀ယ်ပေးတဲ့သူတောင် တွေ့ဖူးပါတယ်။
တကယ်တော့ အိမ်ဖော်ဆိုတိုင်း အောက်မကျပါဘူးဗျာ
တစ်ချို့က အိမ်ဖော်ဆိုရင် နှိမ့်ကျတယ်ထင်နေတာ
လာကြည့်ပါအုန်း တစ်ချို့အိမ်ဖော်တွေဆို ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲတွေနဲ့
အမေက ပြောဖူးတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့သူတိုင်းက သနားစရာမကောင်းဘူး သမီးတဲ့။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မကြိုးစားချင်လို့ မရုန်းထွက်ချင်လို့ ပျင်းနေလို့ ဆင်းရဲတာဆိုရင် ငွေတွေ သွားပုံပေးလဲ လပိုင်းလောက်နဲ့ ကုန်မှာပဲတဲ့။
ငယ်ငယ်က အပြင်ထွက်တဲ့အချိန် လမ်းပေါ်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ပုံစံနဲ့ လျှောက်သွားတာမြင်ရင် စိတ်ကူးယဉ်ဖူးတယ်။ ငါသာ အသက်ကြီးလာရင် ဆင်းရဲတဲ့ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးတွေ နေဖို့ နေရာတစ်ခု လုပ်ပေးမယ်လို့။ ခုတော့ နည်းနည်းသိလာတယ်။ လူတိုင်းက စေတနာနဲ့ မတန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘ၀ကို ရိုးရိုးသားသားရုန်းကန်နေတဲ့ သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ကူညီချင်ပါတယ်။ Amount များရင်တောင် ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါသည် ပေါ့။
ရုပ်ရည်လေးလဲ ရှိ ကိုယ်ကျင့်သီလလေးလဲကောင်း အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ လို့
စိတ်ဓါတ်လေးသာ မွေးမြူပါ… ဘာသာတရားလည်း ကိုင်းရှိုင်းမယ် ဆိုရင် သမာဒေ၀ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ ကမနေပါဘူး… မိဘကိုလည်း လုပ်ကျွေးပြုစုနေသူဆိုတော့ ကောင်းသောကံတွေ လာဘ်လာဘတွေ ရရှိလာပါလိမ့်မယ်.. ကိုယ်ကျင့်သီလလေးသာ စွဲမြဲပေးစေလိုပါသည်..
She should try to enter the police honestly , she will earn money and can getaroom or house.
အပေါ်က ကိုမင်းဇော် သုံးသိန်းလှူမယ်ပြောတာကြားရတော့ ၀မ်းသာပါတယ် …. ။
မျက်နှာမမြင်ဖူးပါပဲ … အကူညီအမှန်လိုနေသူ ၊ ခက်ခဲနေသူကို ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်လေး အလွန်မွန်မြတ်လှပါတယ် …. ။ သာဓုလည်းခေါ်ပါတယ် ကိုမင်းဇော်ရေ … ။
ကိုထူးဆန်းရေ …. ဒီအခက်ခဲတစ်ခုတော့ စာနာသူတွေကြောင့် ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်တယ်ထားဦးတော့ … အိမ်ငှားနေရတဲ့အတွက် အလုပ်ကိုင် အတည်တကျ မရှိဘူးဆိုလျှင် … နောက်တစ်ခါ အိမ်ငှားချိန်ကျလျှင် ပိုက်ဆံ ထပ်လိုမှာပါ … ။ အိမ်ငှားခ ပြေလည်ဖို့အပြင် ဇာတ်လမ်းထဲက မိန်းကလေး အလုပ်တစ်ခု မယ်မယ်ရရရှိဖို့လည်း လိုသေးတယ်လို့မြင်မိပါတယ် … ။ အမေဖြစ်သူကတော့ … အိပ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်မဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ဖို့ အသိတရားရလာလျှင်တော့ … သူတို့ ဘ၀လေး သာယာနိုင်ကောင်းပါရဲ့လေ …
သားသမီးဆိုးတွေကြောင့် မိဘတွေ ခါးစည်းခံရသလို တစ်ခါတစ်လေကြရင်လည်း ဆိုးတဲ့ မိဘကြောင့် သားသမီးတွေ ခံစားရတာတွေလည်း လောကမှာ ရှိပါတယ်။
အဓိပ္ပာယ်မရှိလိုက်တာ… သုံးသိန်းနဲ့လဲတာ ရူးနေလို့နေမှာပေါ့။ ခုသူက အလုပ်မလုပ်ဘူးလား။ အလုပ်လုပ်ရင် လစာရမယ်။ နောက်တစ်ချက်က အလုပ်ရှင်ကို နားလည်အောင်ပြောပြီး ကြိုငွေထုတ်ပြီး အခန်းငှားလို့ရတာပဲ။ နောက်တစ်ချက်က သူငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိရင်တော့ ဒီတိုင်းငြိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်မိတာပါပဲ။
MG user တွေရဲ့ ကူညီချင်စိတ်၊ အားနည်းသူကို သနားညှာတာတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကတော့ အားရစရာပါပဲ။ ကောင်မလေးကို သုံးသိန်းပေးရုံတင်မကပဲ အလုပ်အကိုင်ပါ ရှာပေးနိုင်မှပိုသင့်တော်မယ်။ htoosan ရေ အသိနဲ့ထပ်တွေ့ရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲ ထပ်တင်ပေးပါအုန်းဗျာ။ ရိုးသားစွာကူညီမယ့်သူနဲ့ တွေပါစေ ဆုတောင်းလျှက်
ဟုတ်တယ် ကိုထူးရေ။ အခုလက်ရှိအခြေအနေ ကိုလဲ စုံစမ်းပြီး
ပြောပြပေးပါအုံးဗျာ။ MG ဝိုင်းတော်သားအားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့